बेहुलाको गहना, मोबाइल लिएर बेहुली फरार, प्रहरीद्वारा खोजी « Canada Nepal
बेहुलाको गहना, मोबाइल लिएर बेहुली फरार, प्रहरीद्वारा खोजी
विवाहको रात बेहुला बेहुली बीच सुहागरात हुन्छ । दुवैले एकअर्कामा सर्मपित हुन्छन् । तर भारतको अजमेरको बिजयनगरमा भने विवाहको रात बेहुलीले बेहुला एक्लै छाडेर भागेकी छिन् । उनले केवल बेहुला मात्र छाडेर गइनन् साथमा सबै सुन, गरगहना चोरेर भागिन् ।
विवाहको रात सबै परिवारजन खाना खाएर सुतेका थिए । यता बेहुलीले सबै सुतेको मौका छोपेर बेहुलाको गहना, मोबाइल लिएर भागिन् । बेहुलीले बेहुलाको सबै गहना लिएर सुतेको बेहुला छाडेर फरार भएकी थिइन् । यस घटनाको खबर बेहुलाकी आमा राती करिब साढे १२ बजे उठ्दा ढोका खुल्ला देखेपछि मात्र सबैले चाल पाएका थिए ।
जयनगरका ताराचन्द मेवाडाले आफ्नो छोराको विवाह महाराष्ट्रको हिंगोली जिल्लाकी ति युवतीसँग तय भएको थियो । विवाह बेहुलीको फोटो हेरेर तय भएको थियो भने विवाहको प्रस्ताव अन्जान व्यक्तिले ल्याएका थिए । अहिले बेहुलाका पिताले बेहुलीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएका छन् । जसको अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति : जेठ १२, २०७९ बिहीबार ७ : ३८ बजे
चीनको ग्वाङ्सीमा भारी वर्षा, बाढीबाट ३८ हजार बढी प्रभावित
विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतामा छः गृहमन्त्री खाण
नेकपा एसले गठबन्धन बाहिर पनि विकल्प खोज्ने, एमालेसँग भने शर्त
‘गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा निजी क्षेत्रको सहयोग महत्वपूर्ण’
एमबिबिएस अध्ययन गर्न १० लाख छात्रवृत्ति
चुट्किला : अशक्त भएँ भनेर
किन उपहारमा रुमाल दिनु हुँदैन ? के-के चीज उपहारमा दिन हुन्छ ? के हुँदैन ?
कुन दूध सक्कली, कुन नक्कली ? कसरी थाहा पाउने ?
बाहिर अर्कै गर्लफ्रेण्ड घुमाउँथे, अचानक प्रेमिकाले चाल पाएपछि…
८ वर्ष अघि हराएको मोटरसाइकल प्रहरीले चलाइरहेको खुलासा, यसरी खुल्यो पोल
हत्या आरोपमा गाई पक्राउ, जेल सजाय हुने
पैसा चोर्न ७ घण्टा बिहेमा प्रतिक्षा, बेहुलीको बुवाको पैसाको ब्याग चोरी